घटेको बजारमा खरीदकर्ता सक्रिय भएसँगै ८.९० अंक बढ्यो नेप्से, १ अर्ब ३२ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री | आर्थिक अभियान
घटेको बजारमा खरीदकर्ता सक्रिय भएसँगै ८.९० अंक बढ्यो नेप्से, १ अर्ब ३२ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
जेठ ४, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ । परिसूचक ८ दशमलव ९० अंक बढेर २ हजार २७४ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको हो ।
यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रको ३१ लाख ५६ हजार ९१३ कित्ता शेयर २७ हजार ५७ पटकमा रू. १ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख २० हजार ३४६ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
बुधवार बजार खुलेको केही बेरसम्म घटेको थियो भने पछि तलमाथि हुँदै अन्त्यमा बढेर बन्द भएको छ । मंगलवार नेप्से परिसूचक ८४ दशमलव ९० अंक घटेको थियो । घटेको बजारमा खरीदकर्ता आकर्षित हुँदा बुधवार बजार बढेको छ ।
अब विस्तारै विकास खर्च हुने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज हुन सकेमा पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यद्धपि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको बारेमा राम्रो सँग आधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्ष राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेकोमा प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रमध्ये राधी विद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ६ दशमलव शून्य २ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६५२ पुगेको हो । यस कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण परेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा सिनर्जी पावर डेभलपमेण्टको शेयरमूल्य ५ दशमलव ९१ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. ३९४ पुगेको छ ।
बुधवार सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधवार १० प्रतिशत घटेसँगै नेगेटिभ सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार १ दशमलव ३० कायम भएको छ । त्यसैगरी शेयरमूल्य घट्ने दोस्रोमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य ४ दशमलव ३९ प्रतिशत घटेर रू. ४५७ मा झरेको हो ।
सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको भएको छ । कम्पनीको रू. ५ करोड ३८ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४२१ कायम भएको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रू. ४ करोड ९५ लाख बराबरको भएको हो ।
कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत र व्यापार समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेको हो भने बाँकी सबै समूहको समूहगत परिसूचक बढेको छ ।
समूहगत परिसूचक बढ्नेमा अन्य समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत, लगानी समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ३० प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव १२ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १ दशमलव ४२ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २४ प्रतिशतका दरले बढेको हो ।